နန်းဆိုင်နွမ်| January 22, 2013 | Hits:2,534
chitthu January 22, 2013 - 6:37 pm အလကားပါ ကိုသာဌေးရာ ဘယ်နေရာကို တိုင်ရမလဲ။
Reply ဌေးဝင်း January 22, 2013 - 7:17 pm ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့ ကားတွေ၊ လိုင်းကားတွေကို ပိုက်ဆံတောင်းနေတာ တွေ့မြင်ရင်ပြောကြပါ။ သူတို့င်္ဆီက…ဝေစုခွဲမလို့လား…ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကို..အေ၇းယူမယ်ဆို၇င်..ယောက်မှကျန်မှမဟုတ်တော့ဘူး။
Reply maung January 23, 2013 - 11:56 am မီး ပွိုင့် က တာ ၀န် မ ကျေ တဲ့ ၊ငွေ တောင်း ပီး စည်း ကမ်း မဲ့ လမ်း ပိတ် ရပ် တာ ကို မ ဆိုင် သ လို နေ တဲ့ရဲ တွေ ကို ထိမ်း သိမ်း ပေး ဖို့ပ ထ မ ဦး စား ပေး လုပ် ပေး ပါ။ တိုင် ကြား ရ မယ့်ဖုန်း နံ ပါတ် ကို လူ အ များ သိ အောင် ကြော် ငြာ ထား ပေး စေ ချင် ပါ တယ်။
Reply ရာဇာ January 23, 2013 - 1:32 pm အလကား ဦးဏှောက် အခြောက်ခံ နေကြတယ်..ပြည်လမ်းကို အင်းစိန်ကနေ ကမ်းနားလမ်းအထိ….ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းကို ၈ မိုင်လမ်းဆုံကနေ ဗဟန်းအထိ….မြောက်ဥက္ကလာ ကနေ ပုဇွန်တောင် အထိ…MRT ရထားလုပ်ပေးလိုက်ရင် အားလုံး အဆင်ပြေသွား မှာပါ…ကားလဲ ကြပ်စရာ အကြောင်း သိပ်မရှိနိုင်တော့ဘူး….လုပ်မယ်ဆိုရင် တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ အမြန်အကောင်အထည် ဖေါ်ကြဘို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါရစေ….ရထားဟာ နေ့စဉ် ရုံးတက်ရုံးဆင်း လုပ်နေသူများ ရဲ့ အဓိက အားထားရာ ပို့ဆောင်ရေးတခု ဆိုတာ နိုင်ငံတော်တော်များများ မှာ လက်ခံနေကြပါပြီ….
Reply han January 23, 2013 - 8:36 pm အလကား ဦးဏှောက် အခြောက်ခံ နေကြတယ်..ပြည်လမ်းကို အင်းစိန်ကနေ ကမ်းနားလမ်းအထိ….ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းကို ၈ မိုင်လမ်းဆုံကနေ ဗဟန်းအထိ….မြောက်ဥက္ကလာ ကနေ ပုဇွန်တောင် အထိ…MRT ရထားလုပ်ပေးလိုက်ရင် အားလုံး အဆင်ပြေသွား မှာပါ…ကားလဲ ကြပ်စရာ အကြောင်း သိပ်မရှိနိုင်တော့ဘူး….လုပ်မယ်ဆိုရင် တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ အမြန်အကောင်အထည် ဖေါ်ကြဘို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါရစေ….ရထားဟာ နေ့စဉ် ရုံးတက်ရုံးဆင်း လုပ်နေသူများ ရဲ့ အဓိက အားထားရာ ပို့ဆောင်ရေးတခု ဆိုတာ နိုင်ငံတော်တော်များများ မှာ လက်ခံနေကြပါပြီ….
Reply tun aung January 24, 2013 - 12:12 pm ယခုလိုစည်ပင်နဲ့ယာဉ်ထိမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုဝမ်းသာကြ်ိုဆိုပါတယ်။ယာဉ်စည်းကမ်း